Malunga nathi - Fuzhou Huasheng Textile Co., Ltd.
Umnqophiso wethuQhubeka nokwenza ixabiso eliphezulu kubathengi kwaye ubonelele abasebenzi ngeqonga lokuziqonda ukuba ubalulekile
Umbono wethuUkuzibophelela ekubeni ngoyena mntu unikezela ngobuchule kunye nokhuphiswano kumthengisi welaphu kunye nokukhuthaza uphuhliso oluzinzileyo nolusempilweni kushishino
Imilinganiselo yethu: Ukugxila, ukuYila, ukusebenza nzima, ukusebenzisana, Ukuphumelela
Fuzhou Huasheng Textile Co., Ltd. yasekwa ngo-2004 Kuyinto umthengisi ngobuchule amalaphu ezinithiweyo. UFuzhou Huasheng uzibophelele ekunikezeleni ngomgangatho ophezulu we-warp knit kunye nesetyhula amalaphu asebenzayo kubasebenzisi behlabathi.
Emva kweminyaka engaphezu kwama-16 yophuhliso oluqhubekayo kunye ezintsha, Fuzhou Huasheng uye wakha intsebenziswano ixesha elide kunye nozinzo qhinga kunye abathengi ezixabisekileyo ezivela North America, Umzantsi Melika, iYurophu, kunye mpuma Asia njl njl Fuzhou Huasheng unandipha igama elihle ebaleni amalaphu okuluka kunye nemijikelo enithiweyo yesetyhula.
Fuzhou Huasheng eneemfuno ezizodwa R & D, imveliso kunye nokuthengiswa amalaphu enemingxuma, amalaphu tricot, amalaphu ijezi, amalaphu ezinqamlezileyo, amalaphu jacquard, amalaphu mélange kunye amalaphu ezisebenzayo. Sisebenzisa izixhobo zomsonto wentsebenzo ephezulu kwaye siziguqulele kumalaphu alungele ukugqitywa kokusebenza emva koko sisiwe kubathengi bethu abaxabisekileyo abavela kwihlabathi liphela.
Okwangoku, sinazo iiseti ezingaphezu kwama-60 koomatshini ukunitha kwaye kufuneka malunga nama-150 abasebenzi. Ngolindelo olutsha lweemarike ngekamva elizinzileyo, silungelelanise iindlela zethu zemveliso kunye nokubonelela ngemixokelelwane. Sizinikela ekuboneleleni ngesisombululo kubathengi bethu.
Amalaphu zethu ezisetyenziswa ngokubanzi kwiinkalo ezininzi ezifana nezemidlalo, banxibe iyunifomu, yoga iimpahla, banxibe nje, iimpahla zefashoni, banxibe umdaniso, iimpahla zangaphantsi, iimpahla zokudada, isinxibo olusondeleyo, kunye iimpahla zangaphantsi njl
UFuzhou Huasheng ubambelela kumgaqo weshishini loMgangatho bubomi bethu kwaye uMthengi ngowokuqala.
Sibamkela ngobubele abahlobo abathandekayo abavela kwihlabathi liphela ukuba batyelele inkampani yethu kunye nokuthetha-thethana kwezoshishino.